ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: အောင်မြင်သူတွေ ဘာကြောင့်အောင်မြင်သလဲ
အောင်မြင်သူတွေ ဘာကြောင့်အောင်မြင်သလဲ
ညချစ်သူ | 10:46 PM | သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ညချစ်သူ | 10:46 PM |
အောင်မြင်သူတွေ ဘာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့ ကြသလဲ ဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခု ရှိပါတယ် ။
အောင်မြင်သူတွေ ဘယ်လိုတွေးခေါ်ခဲ့ သလဲ .......?
ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ခဲ့ ကြသလဲ......?
အချိန်ကို ဘယ်လိုအသုံးချခဲ့ ကြသလဲ......?
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ချမှတ်ခဲ့ ကြပြီး .......
အဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း မဆုတ်မတွန့်လုပ်ခဲ့ ကြလို့ 
အောင်မြင်မှု့ရခဲ့ ကြတာပါ........။
ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သူတိုင်း မေးခွန်းတစ်ခု ကိုတော့ဖြေကြရပါတယ်........။
`` ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆုံးရှုံးမှု့ တွေနဲ့ကြုံနိုင်ခဲ့ သလဲ ။``
ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ .......။
ဒါပေမဲ့သူတို့ တတွေရဲ့ တူညီတဲ့ အချက်ကတော့အားလုံးမေးခွန်းကို ဖြေနိုင်ခဲ့ ကြပါတယ်။
သင်ရော အဲ့ ဒီမေးခွန်းကို ဘယ်လိုဖြေမှာလဲ......။
ဖြေဖို့ အတွက်ရော ဘယ်လောက်အထိ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ..............။
Posted by ညချစ်သူ at 10:46 PM